Barlamaanka ayaa Ansaxiyey Calanka Itoobiya....
Scw: waxaan salaamayaa umadda soomaaliyeed mel kasta oo ay joogaan.
Waxaan filaayaa in cinwaanka maqaalkayga aad is weydiisaan idinka oo leh ,sidee ayuu barlamaanku u ansaxiyey in calanka itoobiya laga taago soomaaliya dhexdeeda.
Hadaba si ay jawaabtu inooku fududaato waa in aan dib u milicsano markii barlamaanka soomaalida la soo hordhigay arinta ciidamo shisheeye oo la keeno dalka iyo sidii ay isugu dagaaleen arintaas oo gartay in meel walba laga daawaday iyaga oo kuraas isla dhacaaya.
Waxaa kale oo iyana mudan inaan xusuusano sidii ay mar labaadkii ay baydhabo ugu ansaxiyeen cod aqlabiyada ah in dalka la keeno ciidamo shisheeye.Hadaba bal is weydii oo maxay markii horena isugu dileen arintaas mar labaadkiina ay cod aqlabiyada ah isugu raaceen , waa suaal sahal ay tahay jawaabteedu waayo waxay mar labaadkan ka cabsi qabeen midowgii maxaakiimta oo markaas gacanta u hayey magaalada muqdisho iyo badi dalka soomaaliya.
Hadaba maanta oo barlamaankii soomaaliya ay dhamaantood raalli ka yihiin joogitaanka itoobiya ,oo weliba kuwii shalay diidanaa ay maanta ugu jecelyihiin joogitaanka amxaarada sida qanyare oo maxaakiimtu xamar ka eryoodeen maxaynu isu weydiinaynaa calanka itoobiya ee laga tagay soomaaliya dhexdeeda .
Itoobiya dantay doonto ha ka lahaato taagista calanka ama sida la idinka dhaadhicinaayo dad kale ha tagaane maxaa calankooda loo diidayaa haddii dalkii oo dhan lagu aaminay oo la yiri idinkaanu idin aaminay zeynawina laga dhigtay weli laga barakaysto.
Ma waxaa la doonayaa in amaxaarradu xamar dhex maraan calankoodana qariyaan taasi waa sheekada gorayda oo madexeeda ciidda ama carada ku qarisa inteedii kale oo taagan banaanka.
Professor dalxa iyo kuwa ka dhiidhisan taagista calanka itoobiya waxaan idin leeyahay haddii aad tihiin wadaniyiin damqanaya u tafa xayta sidii dalka looga saari lahaa itoobiya askarigeeda ilaa sarkaalkeeda,haddii kale daaya waxa ay dhabaynayaan riyadii minilikh ee oranaysay soomaaliya waa gobol ka mid ah itoobiyada weyn.
umadda soomaaliyeedna waxaa maanta u soo hoyatay guul darro iyo ceeb maadaama calankii itoobiya laga taagay muqdisho dhexdeeda, ama amxaar ha ka taago ama soomaali ha taago waa isku mid itoobiya wa u guul ,waxase is weyndiin leh aaway soomaalinimadii aaway wadaniyadii aaway midnimadii iyo qaranimadii .
Waxaa qalad laga galay oo loo gafay halgamayaashii 1964 iyo 1977 naftooda u huray ciidda qaaliga ah, waxaa la inkiray ducadii ay mudnaayeen waalintood waxaana laga galay gaf weyn agoonta aabayaashood ku dhinteen dagaalkaas iyo kuwa nool ee naafada ah ,waxaa la xaqiray haweenkii halgamayaashu ka dhinteen oo maanta iyagoo waayeel ah amxaar guryahoodii loogu keenay.
Waxaa meel looga dhacay taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed ,libintoodiina laga dhigay waxbayahay.
Waxaa halkii laga abaal marin lahaa loogu jawaabay waad qaldanaydeen oo walaalhiin baad la dagaalamayseen ee raali geliya.
Waxaa la duudsday taariikhda iyo halgankoo gobolka Ogaden iyo dadka ku nool oo dhan,waxaana looga hiiliyey oo laga raacay amxaarka ilaa maanta iyo saacad walba gumaadaya , jeelashana ay uga buuxaan wiilashoodii.
Waxaa maanta la sharciyeeyey nacayb iyo colaad lakala dhex dhigo umadda soomaaliyeed waxaana mar labaad qiil loo sameeyey dulmiga iyo cadaalad xumada, waxaana la galay taariikh madow oo reebi doonta wax aad u fool xun.
Waxaa wadada loo xaaray dagaal sokeeye oo ka xun kii dhacay 17 sano e la soo dhafay.
Waxaa la duugay hankii iyo himiladii umadda soomaaliyeed ,waxaana la beeniyey wedhii oranaysay soomaalida haddan nahay iyo hideheenii an ku faani jirnay.
Waxaa la sameeyey sawirro cusub oo aan la filanayn in taariikhda lagu arko(askari amxaara oo muqdisho dhexmaraaya).
Waxaa la jeexay xuduud cusub oo aad khariidadeeda ku jaah wareeraysid.
Hadaba jaraaimkaas aan xadka lahayn waxaa dembiilayaasha galay lagu xukumi doonaa maxkamadda taariikhda iyaga oo nool iyo iyaga oo dhintayba.
Waxaa guulaysanaaya halgamayaasha iyo inta jecel dalkooda iyo dadkooda waxaana u dambeyn doona farax iyo qosol ,waxaana qoomamayn doona kuwa aaminay maalmaha iyo saacadaha la noolyahay ee aan horay u eegin adduun iyo aakhiro midna.
Waaxse is weydiin mudan oo aan la yaabanahay Soomaaliyeey idin mee?
Maxaa aamusiyey aqonyahanka iyo wax garadka soomaaliyeed iyo culumada ku nool daafaha aduunka maxaa loo qaadi waayey mudaaharaad laga dhigo dal iyo dibad oo lagu muujiyo diidmo qayaxan oo lagu nacaayo itoobiya iyo cidda wadata?
Mise waxaan sugnaa marka aan noqono sida falstiiniyiinta oo waqti aanu waxba tarayn ayaan dhagax tuurnaa?